ဒီဇိုင်နာသစ်ဗီဒီယိုတစ်ခုတွင် ၄၂၁၂၃ McLaren Senna ၏ဘီးနောက်ကွယ်တွင်ထားပါ
12 / 02 / 2021 12 / 02 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 638 Views စာ0မှတ်ချက် ၄၂၁၂၃ McLaren Senna GTR, ပုံစံရေးဆှဲသူ, ဒီဇိုင်နာဗီဒီယို, Lego, Lego Technic, McLaren, Mclaren senna, စူပါ
မင်းဟာခြံစည်းရိုးပေါ်ရောက်နေပြီဆိုရင် Lego နည်းပညာ 42123 McLaren Senna သည် Lego နောက်ကွယ်မှမြင်ကွင်းများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားကြည့်ရှုရန်အတွက်အုပ်စုသည်ဒီဇိုင်းအတွက်ဒီဇိုင်းဗွီဒီယိုကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။
st မှာဖြန့်ချိart ယခုနှစ်တွင် ၄၂၁၂၃ McLaren Senna သည်လူကြိုက်များသောတစ်ခုဖြစ်သည် နည်းပညာ supercar model များသည်ဈေးနှုန်းနိမ့်နိမ့်နိမ့်ဈေးနှုန်းဖြင့်တည်ဆောက်သူများအတွက်အဆင်ပြေပါသည်။ ကန ဦး ဖြန့်ချိပြီးတစ်လအကြာတွင်မော်ဒယ်အတွက်ဒီဇိုင်နာဗီဒီယိုကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
ဗီဒီယိုဖော်ပြချက်အရ McLaren Tech Club သည်ထိုနေရာတွင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည် Lego ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဒီဇိုင်နာAurélien Rouge အား Group မှ HQ ကတောင်းဆိုသည်။ ဒါကဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူကို set ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေရုံသာမကဘဲ၊ အသစ်ကကျောင်းဝင်းအဆောက်အ ဦး များ.
Aurélienကစူပါကာပုံတူကိုဒီဇိုင်းဆွဲရာတွင်ကြုံတွေ့ရသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုမှာ livery စတစ်ကာများအတွက်မျက်နှာပြင်အလုံအလောက်ထားရှိခြင်းသည်ပုံသဏ္keepingာန်ကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ သူသည် V8 အင်ဂျင်သည်ပုံမှန်အပိုင်းများကိုမသုံးသော်လည်းမော်ဒယ်၏စကေးနှင့်ပိုမိုသင့်တော်သောစနစ်သစ်တစ်ခုကိုလည်းသူကဖော်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါ နည်းပညာ 42123 McLaren Senna ကိုတရားဝင်အွန်လိုင်းမှယခုရရှိနိုင်သည် Lego စတိုး.
← LEGO NINJAGO Season 14 နောက်တွဲယာဉ်ကို HD တွင်ရနိုင်သည်
LEGO Brawls သည် NINJAGO နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုကျင်းပသည် →